Crem sy ny Unicef: mamono antoka ny toekarena ny tetibola ho an’ny sosialy | NewsMada
Crem sy ny Unicef: mamono antoka ny toekarena ny tetibola ho an’ny sosialy
Raha ny fanadihadiana nataon’ny Faribolan’ny mpahay toekarena (Crem)* sy ny Unicef, ny sehatra sosialy ho an’ny fanjakana, mandany vola fotsiny mampitombo trosa, vola tsy mihodina, ka atao an-kilabao hatramin’izay.
Nanao fanadihadiana ny Crem momba ny tetibola atokan’ny fanjakana ho an’ny sosialim-bahoaka : ny fampianarana, ny fahasalamana, ny rano fisotro, ny fiarovana ara-tsosialy. Tsy laharam-pahamehana ireo amin’ny fanjakana, 30 % amin’ny tetibola ny amin’ireo, ny ambiny avy any ivelany. Mazava tsara ny fehin-kevitra navoakan’ny Crem vokatry ny fikarohana samihafa : misy akony lehibe any amin’ny fampandrosoana ny toekarena ny fanomezan-danja ny sehatra sosialy.
Ohatra faran’izay tsotra, raha tsy salama ny olona iray afaka miasa, miteraka fatiantoka any amin’ny toekarena izay. Eto Madagasikara, tombanana 128 tapitrisa dolara ny fatiantoka vokatry ny tsy fahafahana miasa noho ny antony fahasalamana. Fatiantoka iray lehibe hafa ny ateraky ny tsy fahampian-tsakafo, tsy fahazoana rano fisotro. 207,6 tapitrisa dolara isan-taona ny fatiantoka noho ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fotodrafitrasa tsy ampy mahakasika ny sosialy, toy ny toeram-pidiovana.
Any amin’ny fampianarana, mitombo isa ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly, ankoatra ireo miala an-daharana, manomboka amin’ny ambaratonga fototra. 20 % ihany ny fandaniana ataon’ny fanjakana any amin’ny fampianarana. Fotodrafitrasa sy kalitao ny fampianarana : tokony handaniana 200 dolara ny ankizy iray amin’ny ambaratonga fototra, 300 dolara any amin’ny ambaratonga faharoa ; ny eto amintsika, raha nalaina tao amin’ny PSE (Plan sectoriel de l’éducation), 100 dolara sy 145 dolara amin’ireo ambaratonga roa ireo, raha ho tratra. Mbola hafa ny ambaratonga ambony… Ny tanora tsy ampy fahaizana sy fahalalana, tsy afaka mampandroso toekarena.
Fandrindrana ny fiainam-pianakaviana
Mifandray amin’ny lafiny sosialy, nanolotra politika fanatsarana ny anjara vola miditra amin’ny tsirairay (dividende démographique), ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibola. Raha mihena ny isan’ny zaza ateraky ny vehivavy iray, mihatsara io anjaran’ny isam-batan’olona io, satria mitombo ny afaka miasa. Miankina betsaka amin’ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana izay. Efa nofaritan’ny Vondrona afrikanina ny fototry ny asa : fampianarana miteraka fahaizana, fahasalamana, ary ny tanora. Ny fampitomboana ny vola tokony hiditra amin’ny isam-batan’olona afaka miasa, indrindra ny tanora, miankina amin’ny fampiasam-bola amin’ireo sehatra sosialy ireo, toy ny efa famaritan’ny Crem sy ny Unicef azy.
Crem* : Cercle de réflexions des économistes de Madagascar